Kiiska taagan maqaar shaqeynaya Kiiskani wuxuu isku daraa suunka gacanta, qalin qori iyo laad laad. Waxay haysaa dhagahaaga oo istaaga. Xor u yeelo gacantaada markaad wax akhrinaysid, sidoo kale cabbo kafee. Qalin-hayaha ayaa haya qalinkaaga markii aadan isticmaalin. Naqshadeynta suunka gacanta leh suunka gacanta / gacan qabashada, waxay kuu ogolaaneysaa inaad akhristaha ku heysato hal gacan.Bandhigga laastikada ayaa raaxo leh oo ku habboon adiga iyo gacmaha kale. Xasiloonida istaaga ee xaraashka ah Gacantaada ka siidaa .Waad laad laad laad ku dhufataa, akhristaha ayaa si adag u taagan ...